စွမ်းအင်ဆိုတာဘာလဲ။ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ။ အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အမျိုးအစားများစွာရှိပြီးတစ်ခုစီတွင်မတူညီသောလည်ပတ်မှုရှိသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည် - အကန့်အသတ်မရှိမြေယာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုမရှိသောသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်။ ဒီကိစ္စမှာငါတို့ဘာတွေပြောကြမလဲ ရေအားလျှပ်စစ်.
ဤဆောင်းပါးတွင်ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်း၏လက္ခဏာများ၊ ၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ထုတ်လုပ်သည်၊ ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ပြပါမည်။
ရေအားလျှပ်စစ်သည်မြစ်ကြမ်းပြင်၏အမြင့်တစ်နေရာတွင်ရေစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုမြစ်ကြမ်းပြင်၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်နောက်ဆုံးအားဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်။ ရေ၏စွမ်းအားကိုလျှပ်စစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရန်အကြီးမားဆုံးသောရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ရန်တိုးချဲ့သည် ဤဒေသဆိုင်ရာ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုကင်းမဲ့သောအရင်းအမြစ်များ၏အလားအလာ.
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပြီးတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီလည်ပတ်နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သည်ရေစီးဆင်းမှုနှင့်ရေတံခွန်အမြင့်နှင့်အချိုးကျသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအများအားဖြင့်ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သည် ဒါခေါ် "ဗဟိုရေလှောင်ကန်" ။ ဤအပင်အမျိုးအစားများတွင်ရေသည်ရေကာတာအတွင်းစုဆောင်းပြီးတာဘိုင်အထက်အမြင့်မှကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့်တာဘိုင်ကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့် nacelle တွင်ရှိသောမီးစက်မှတစ်ဆင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက်ယင်း၏ဗို့အားသည်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုမရှိပဲစွမ်းအင်ကိုသယ်ဆောင်ရန်မြှင့်တင်ပြီးဇယားကွက်ထဲသို့ထည့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အသုံးပြုသောရေသည်၎င်း၏သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိ။
နောက်တစ်နည်းမှာ "အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်းများ" ဖြစ်သည်။ ဤအပင်အမျိုးအစားများသည်မြစ်၏သဘာဝကျောကုန်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ရေကိုစက်ရုံသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ တာဘိုင်များသည် (မြစ်သည်မတ်စောက်သောတောင်စောင်းရှိပါက) ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်အလျားလိုက် (ဆင်ခြေလျှောနိမ့်ပါက) သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ သူတို့နှင့်ဆင်တူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖို့လမ်းအတွက်ရေလှောင်ကန်စက်ရုံ။ ဤစက်ရုံများသည်ရေသိုလှောင်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသည်။
ဆည် ၎င်းသည်မြစ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုမီရေထုများ (ဥပမာရေလှောင်ကန်များ) ကိုကြားဖြတ်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောရေကွဲပြားမှုကိုဖန်တီးရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဆည်များကိုရွှံ့သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည် (အများဆုံးအသုံးပြုသည်) ။
ယိုဖိတ်မှု သူတို့ကအင်ဂျင်ခန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရပ်တန့်ထားသောရေကိုထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိပြီးဆည်မြောင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဆည်၏အဓိကနံရံတွင်တည်ရှိပြီးအောက်ခြေသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေအများစုသည်ပျက်စီးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ရေကာတာ၏ခြေရင်း၌ရှိသောအင်တုံထဲတွင်ဆုံးရှုံးသွားသည်။
ရေစားသုံးမှုဖြေ - သူတို့ကကြားဖြတ်ရေကိုစုဆောင်းပြီးအဲဒီစက်တွေကိုလမ်းကြောင်းတွေ၊ အတင်းအဓမ္မပိုက်တွေဖြတ်ပြီးသယ်ယူတာတွေလုပ်ရတယ်။ ရေဝင်ပေါက်သည်တာဘိုင်သို့ရောက်ရှိနေသောရေပမာဏနှင့်နိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထုများ (သစ်များ၊ အကိုင်းအခက်များ) မသွားခြင်းမှကာကွယ်ရန် filter တစ်ခုရှိသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ: စက်များ (မီးစက်တာဘိုင်များ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်များ၊ ရိုးတံများနှင့်ဂျင်နရေတာများ) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းချိန်တွင်စက်၏areaရိယာကိုရေမရှိဘဲထွက်ရန်တံခါးနှင့်ထွက်ပေါက်များရှိသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်။ ၎င်းတို့မှဖြတ်သွားသောရေ၏စွမ်းအင်ကို၎င်း၏ ၀ င်ရိုးမှလှည့်လည်ရွေ့လျားစေရန်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်။ Pelton ဘီးများ၊ Francis Turbines နှင့် Kaplan (သို့မဟုတ် propeller) တာဘိုင်များ။
ပါဝါဂီယာလိုင်း: ထုတ်လုပ်ပြီးစွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်တဲ့ cable ကို။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
မျောပါခြင်းမှာရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ- ဤရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့်တာဘိုင်များစီးဆင်းမှုအပေါ် မူတည်၍ မြစ်များမှရေကိုစုဆောင်းသည်။ ရေbetweenရိယာများအကြားမညီမျှမှုသည်သေးငယ်ပြီး၎င်းတို့သည်စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းရန်လိုအပ်သည့်အချက်အချာနေရာများဖြစ်သည်။
အရံသိုလှောင်ထားသည့်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ - ဤရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည်ရေကာတာတစ်လျှောက်ရှိ“ အထက်ပိုင်း” ရှိရေလှောင်ကန်ပမာဏကိုအသုံးပြုသည်။ မြစ်စီးဆင်းမှုမည်သို့ပင်ရှိစေရေသိုလှောင်ကန်သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်တာဘိုင်များနှင့်ရေပမာဏကိုခွဲခြားထားသည်။ ဤစက်ရုံအမျိုးအစားသည်စွမ်းအင်အများဆုံးသုံးနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် kWh သည်စျေးသက်သာသည်။
ရေအားလျှပ်စစ် pump ဤရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင်စွမ်းအင်ထပ်မံလိုအပ်ချိန်တွင်အသုံးပြုသောရေအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသောရေလှောင်ကန်နှစ်ခုရှိသည်။ အထက်ရေတိုင်ကီမှရေသည်တာဘိုင်ကို ဖြတ်၍ အနိမ့်ဆုံးကန်သို့ဖြတ်ပြီးလျှင်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နိမ့်သည့်နေ့တွင်ရေတင်နေသောအထက်ရေတိုင်ကီသို့ပြန်သွားသည်။
နည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့်မိုက်ခရိုဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များသည်လျှပ်စစ်စျေးကွက်တွင်အပြိုင်အဆိုင်ကုန်ကျစရိတ်များရှိသော်လည်းစက်ရုံအမျိုးအစားနှင့်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အကယ်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းအင်သည် ၁၀ မဂ္ဂါဝပ်ထက်နည်းပြီး၎င်းသည်ရေသိုမဟုတ်စီးကျလာနိုင်သည်ဆိုပါကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုသေးငယ်သောရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ယနေ့တွင်စပိန်ရေအားလျှပ်စစ်ကဏ္ sector ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်သည် ရှိပြီးသားအဆောက်အ ဦ များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာထိရောက်မှု။ ဤအကြံပြုချက်များသည်တပ်ဆင်ထားသောစက်ရုံကိုပြုပြင်ရန်၊ အဆင့်မြှင့်ရန်၊ တိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ 10KW ထက်နိမ့်သောစွမ်းအင်ဖြင့် Hydraulic microturbines များကိုတီထွင်ထားသည်။ ၎င်းသည်မြစ်များ၏အရှိန်ကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်သီးခြားဒေသများတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ တာဘိုင်သည်လျှပ်စစ်ကိုတိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်စီးဆင်းစေပြီးကျဆင်းသွားသောရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များမလိုအပ်ပါ။
စပိန်နိုင်ငံတွင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ ၈၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ၂၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ကျော်ရှိသောဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၂၀ သည်စုစုပေါင်းရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အခြားအဆုံးမှာတော့ စပိန်နိုင်ငံတွင်စွမ်းအင် ၂၀ မီဂါဝပ်ထက်နည်းသောဆည်ငယ်များစွာရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင် » ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုတာဘာလဲ